Wuxuu Soo Maray Dhibaato aad u baaxad Weyn, Wuxuuse hadda Higsanayaa Meel Sare oo uu ku Gaarayo Aqoontiisa.
Waa Abdinasir Haji-Bare oo kamid ah11ka Arday ee ugu Buundada Sareeysa Fasalka ugu Dambeeya Dugsiga Sare ee Edison High School, Minneapolis, Minnesota, USA
Maalin dhoweyd ayaa waxaan la kulmay warqad lagu faafiyey Minneapolis oo muujineysey afar arday oo soo maray marxalado adag,laakiin hadda waxbarashadooda heer sare ka gaarey, waxaa markiiba indhahaygu soo jiiteen wiil Soomaaliyeed oo da'yar oo magacisa la yiraahdo Cabdinaasir Haaji Barre oo ka mid ah ardayda warqadaasi ku qoraa, qoraalkii oo aan sidii uu ahaa u soo tarjumey waxa uu u dhignaa sidan:
Toddoba sano jir aayuu ahaa cabdinaasir waqtigii uu kasoo baxay Soomaaliya markii labadiisii waalid iyo walaalkiis lagu diley dagaalkii ahliga ahaa ee halkaas ka dhacay. Gaarigii baska ahaa ee u soo raacay kenya waxaa weerar kusoo qaaday koox shufto ah oo hubaysan, Cabdirnasir wuxuu ka mid noqday dhawr qof oo weerarkaas jid gooyada ahaa ka badbaadey. Xero qaxooti kabacdi waxay Cabdinaasir is heleen Adeerkiis, waxuuna usoo kicitimay Minnesota.
Cabdinaasir hadda waa ardayda 11aad ee ugu buundada sareeya fasalkiisa ugu dambeeya ee Dugsiga Sare ee Edison High School oo kuyaal magaladaa Minneapolis ee Gobolka minnesota, USA. isku-celceliska buundada Cabdinaasir waa 3.77 GPA (grade-point average... GPA waa habka lagu cabiro buundada ardayda, buundada ugu saraysa oo la keenikaraana waa 4 sida ka muuqata shaxda bidix).
Cabdinaasir waxa uu ka qayb qaataa qaybo ka mid jaaliyada Soomaaaliyeed, waxa uu ciyaaraa ciyaarta tennis-ka, waxana uu hogaamiyaa koox lagu magcaabo midnimada Soomaalida oo ah koox isu keenta ardayda meelaha kala duwan kasoo jeeda.
Cabdinaasir wuxuu rajaynayaa in uu isu diiwaan geliyo Jaamacadda Minnesota.
Halkaas ayuu ku dhamaaday qoraalkii ka hadlaayey Cabdinaasir ee ku qoraa warqadda, waxaana halkaas ka muuqda dadaalka uu sameeyey cabdinaasir iyo sida uu uga faa'iideystey fursada waxbarasho ee uu helay, taas oo in badan oo fursadaasi soo martay lagayaabo in aysan ka faa;iideysan.
Soomaaliya oo ah dalka ay ku dheceen dhibaatooyin aad u baaxad weyn oo ay ugu horeyso nidaamkii waxbarasho oo burburay ayaa marka aad aragtid arday Soomaaliyeed oo dadaal intaas le'eg muujiyey ay niyadaadu ku farxeysaa.
Waxaa cad in cabdinaasir tusaale fiican oo horseed iyo ku dayasho mudan uu u noqon doono in badan oo ah arday Soomaaliyeed oo da'diisa ah oo haysta fursad waxbarasho, meelkasta oo ay dunida ka joogaan.
300 Arday Soomaaliyeed ayaa dhigta Edison High School oo kamid ah dugsaiga Sare ee magaalada Minneapolis.